एकैदिन दुई हजार ३ सयले घट्याे सुनको मूल्य, आज तोलाको कति छ ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more एकैदिन दुई हजार ३ सयले घट्याे सुनको मूल्य, आज तोलाको कति छ ?
एकैदिन दुई हजार ३ सयले घट्याे सुनको मूल्य, आज तोलाको कति छ ?
पुस २६ गते, २०७७ - १२:०७
अर्थ डबली, शीर्ष समाचार
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्यमा ठूलो अङ्कले ह्रास आएको छ । सुनको मूल्यमा प्रतितोला रु दुई हजार ३०० ले ओरालो लागेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले आजका लागि तोकेको मूल्यअनुसार छापावाला सुन प्रतितोला रु ९३ हजार छ । प्रतितोला रु ९५ हजार ३०० मा शुक्रबार कारोवार भएको छापावाला सुन आज प्रतितोला रु दुई हजार ३०० ले ओरालो लागेर रु ९३ हजार कायम भएको छ । यस्तै तेजाबी सुन आजका लागि प्रतितोला रु ९२ हजार ५०० तोकिएको छ । प्रतितोला रु ९४ हजार ८०० मा शुक्रबार कारोवार भएको थियो । तेजाबी सुन शुक्रबारका तुलनामा आज रु दुई हजार ३०० ले नै ओरालो लागेको हो ।
यस्तै चाँदीको मूल्य प्रतितोला रु एक हजार २७० मा कारोवार हुने गरी मूल्य निर्धारण भएको छ । चाँदी प्रतितोला शुक्रबार रु एक हजार ३३० मा कारोवार भएको थियो । चाँदी तोलामा रु ६० ले घटेको हो ।
पुस २६ गते, २०७७ - १२:०७ मा प्रकाशित